पूर्वगृहमन्त्री बस्नेतको दाबीः सरकार गठनअघि नै एमालेसँग एकता हुन्छ | Ekhabaronline.com
पूर्वगृहमन्त्री बस्नेतको दाबीः सरकार गठनअघि नै एमालेसँग एकता हुन्छ
प्रचण्ड चितवन हिंडेपछि तीन दिनलाई टर्यो एमाले-माओवादी वार्ता
| प्रकाशित मितिः शुक्रबार, पुस २१, २०७४ 8:29:46 AM | 108 पटक पढिएको |
मंगलबार माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ब्रिफिङ हेर्दा आजभोली नै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग उनको भेटवार्ता हुने र लगत्तै पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यसो हुन सकेन।
बिहिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोजना गरेको पाँच पार्टीको बैठकमा सहभागी भए लगत्तै अध्यक्ष प्रचण्ड तीन दिनका लागि फेरि चितवन उडे। बैठकमा अनुपस्थित भएका कारण ओलीसँग उनको त्यहाँ पनि भेट हुन सकेन।
अब कम्तिमा तीन दिनयता प्रचण्ड र ओली भेटवार्ता हुने संभावना छैन, जसले एकता संयोजन समितिको बैठकलाई अझै पर धकेल्ने र एकता प्रक्रियामाथिको अन्योलन झन् बढ्न सक्नेछ।
एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताले नै प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरी एकता संयोजन समिति नै बनाएका थिए, जसको बैठक एक पटकपनि बस्न सकेको छैन। अहिले आएर माओवादीले सरकार गठन अगाडि नै एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने जोड दिएको छ भने एमाले पहिला सरकार गठन गर्ने मानसिकतामा देखिन्छ।
यही सन्दर्भमा मैले माओवादीका सचिवालय सदस्य शक्ति बस्नेतसँग सोधेको थिएँ।
प्रचण्ड चितवन उडेपछि अब पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक झन् पर धकेलियो, हैन?
एकता संयोजन समतिको बैठक त नेताहरुको कार्यव्यस्तताका कारण बस्न नसकेको हो, अब तुरुन्तै बैठक बस्छ। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कार्यक्रमका लागि आज चितवन जानुभएको हो, उहाँ चितवनबाट फर्किएलगत्तै बैठक बस्छ। नेताहरुको व्यस्तताकै कारण बैठक बस्न नसकेको हो, अरु कारण छैन।
एमाले र माओवादी एकता प्रक्रिया किन यसरी अड्किएको हो?
पार्टी एकताको प्रक्रिया सकारात्मक रुपमा अघि बढिरहेको छ। प्रमुख नेताहरुका बीचमा बैठक भएपछि यो विषय निर्णायक रुपमा एकता संयोजन समितिमा प्रस्तुत हुन्छ। संयोजन समितिको बैठकपछि यस विषयलाई थप अगाडि बढाउने कुरा छ। सरकार गठन अगाडि नै पार्टी एकता गर्ने स्पिरिटमा छलफल चलिरहेको छ।
मंगलबार बसेको माओवादीका केन्द्रीय कार्यालयको बिस्तारित बैठकले गरेको निर्णय के हो, एकताबारे?
अहिले दुवै पार्टीभित्र तत्काल एकतामा जानुपर्छ भन्ने स्पिरिटमै छलफल चलिरहेको छ। यहि स्पिरिट अनुसार जाँदा स्वभाविक रुपमा सरकार बन्नुअघि नै पार्टी एकता हुन्छ। पार्टी एकता तत्काल हुनुपर्छ भन्नेमा दुवै पार्टीको स्पिरिट एकै ठाउँमा छ, यसमा हाम्रो कहिँपनि मतभेद छैन। त्यसैले सरकार गठन अगाडि नै पार्टी एकताको प्रकृया शुरु भइसक्छ।
पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको विषय नमिलेका एकता लम्बिरहेको हैन र?
यो कुनै विवादको विषय नै होइन। त्यो विषय हामीहरुबीच प्रमुखताका साथ उठेको पनि होइन। चुनावमा जनताले दिएको म्याण्डेटलाई सम्मान गर्दै तत्काल एकतामा जानुपर्छ भन्ने नै दुवै पार्टीभित्रको प्रमुख मत हो। हामीभित्र पनि त्यही ढंगले छलफल चलिरहेको छ। बाहिर प्रधानमन्त्री को हुने वा पार्टी अध्यक्ष को हुने भन्ने विषय नै प्रमुख हो भनेर चर्चा भयो। तर हामीभित्र बाहिर चर्चा भएजस्तो यस विषयले त्यत्रो ठूलो महत्व पाएको छैन। अहिले पार्टी एकताको विषयलाई लिएर अत्यन्त सकारात्मक छलफल चलिरहेको छ।
विभिन्न ढंगबाट छलफलहरु चलिरहेकै छन्। विचारको कोणबाट पनि कतिपय विषयमा हाम्रा बुझाइहरु फरक छन्। कतिपय विषयलाई महाधिवेशनमा लगेर टुंग्याउने र कतिपय विषयलाई अहिले नै प्रष्ट गर्ने ढंगले पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौं। यी सबै कुराहरुको व्यवस्थापन हुन्छ। मोटामोटी छलफलहरु भइरहेकै छ, समग्र विषयमा छलफल गर्दै तत्काल पार्टी एकतातर्फ जाने नै हाम्रो तत्कालको स्पिरिट हो।
छलफल त चलिरहेको होला तर सरकार र पार्टीको नेतृत्वकै विषयमा रस्साकस्सी चलिरहेको पनि त हो नि?
तपाईँले भनेजस्तै त होइन। एउटा प्रसंगमा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलको अलि फरक धारणा आयो, उहाँको धारणा संस्थागत धारणा होइन भन्नेपनि भइसक्यो। विभिन्न प्रसंगमा आएका कुराहरुलाई आधार बनाएर त्यहि ढंगले बहस गरिरहनु उपयुक्त पनि हुँदैन। पार्टी र सरकारको नेतृत्व कसको हुने भनेर बहस चलाउनु भन्दापनि दुवै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु बसेर उपयुक्त कार्यविभाजन गर्नुपर्छ। जनताले दिएको म्याण्डेट अनुसार तत्काल पार्टी एकता गर्ने भन्ने ढंगले छलफल हुन्छ। पार्टी एकता अहिलेको आवश्यकता हो। यो कुरालाई दुवै पार्टीले महशुस गरेको स्थितिमा सबैलाई सहज हुनेगरी टुंगोमा पुग्ने कुरा आजको आवश्यकता हो, त्यसो भइसकेपछि यी कुराहरु विवादको विषय रहँदैनन्।